Wariyeyaal ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn Diyaaradeed | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Wariyeyaal ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn Diyaaradeed
Wariyeyaal ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay duqeyn Diyaaradeed
Muqdisho (SNTV)-Duqeyn ka dhacday Gobolka Jubada Dhexe ayaa lagu burbiriyey Xaruntii Idaacadda Maleeshiyaadka Al Shabaab taas oo ku taalay Degmada Jilib.
Duqeynta ayaa khasaaro lixaad leh gaar siisay Wariyeyaal ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab kuwaas xiliga duqeyntu dhacday ku sugnaa xarunta.
Saraakiil ka tirsan Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa xaqiijiyay in duqeyn lala beegsaday Idaacadda Al-Andulus oo ah idaacad ku hadasha Afka Al-Shabaab, iyadoo halkaas lagu dilay ku dhawaad 20 Maleeshiyo.
Balse Warar hoose Warbaahinta Qaranka heshay ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 kamid ah Wariyaal isku sheega Al Shabaab halkaas lagu dilay sidoo kalena lagu buriyey Xarunta Idaaacadda.
Sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in Duqeynta kadib haalkaas dusha kaga soo dageen kumaaandoos katirsan Malatiriga Soomaaliya kuwaas oo goobta ka sameeyey howlgal kaatay muddo saacad ah.
Maleeshiyaadka Idaacada Al Shabaab ka hadlayey ee ladilay waxaa kamid ah Feysal Yare, Maxamed Aadan, Cabdikariim iyo Xasan Cabdiraxmaan oo Gobolka Gado u qaabilsanaa kaas markii danbe Jubada dhexe u wareegay.
Idaacadan ayaa ka shaqeyneysay in Urururka Al Shabaab u adeegsadaan inay dadka ugu gudbiyaan Ficilada foosha xun oo ay sameeyaan, iyadoo sidoo kale muddo haatan laga joogo 4 Bilood duqeyn loo geystay ay sababtay inay muddo hawada ka maqnaanto.
Idaacadan ayaa waxaa ay hadba sidhuumaaleysi ah ugu shaqeyn jirtay Deeganada ku sugan yihiin Maleeshiyaadka Al Shabaab.
Shalay ayay Saraakiisha Militariga Soomaaliya sheegeen in duqeyn ka dhacday Magaalada Bu’aale ay ku dileen afar Wariye oo ka tirsan Al-Shabaab.
Sidoo kale Warbaahinta Qaranka ayaa ogaatay in mar sii horaysay dagaal ka dhacay isla magaalada Bu’aale oo u dhaxeeyay Maleeshiyaadka Isku haysta baa’binta Shacabka Soomaaliyeed ee Al-Shabaab iyo Daacish uu ku dhaawacmay mid ka mid ah xubnaha sar sare ee idaacadda Andulos.
12-bilood ee la soo dhaafay waxay ahaayeen Bilihii Khasaaraha ugu badan uu soo gaaray Al-Shabaab, iyadoo in ka badan kun isugu jira Maleeshiyaad iyo Horjoogayaal ka tirsan kooxda lagu laayay Howlgalo iyo dagaalo toos ah oo ciidamada Qaranka ay sameeyeen.
Diyaaradaha Mareykanka oo kaashanaya Malatariga Soomaaliya ayaa kordhay duqeymaha ay la beegsanayaan Saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin qaar ka mid ah Gobalada dalka.
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha K/Galbeed oo la kulmay Odayaasha Dhaqanka
Next articleCiidamada Xoogga dalka oo howlgal ku qabtay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab